Dzhordzh Marshall: Biography futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Dzhordzh Ketlett Marshall ml. - ukuthi efika engqondweni yakho uma uzwa lelo gama? Ubani livela phambi kwakho: wezempi onesihluku, ehlaselwa abantu abangakwazi ukuzilwela ngamabhomu athomu, noma umuntu osizayo isihe Europe, wathola i-project yakhe uMklomelo KaNobel?
Kuyaphawuleka ukuthi impilo kanye nomsebenzi we Marshall ugcwele izimfihlakalo futhi aliziphikisi. Ake sibheke kubo eduze futhi ukuthi ungubani, lokho akwenza nesizathu nalokho eyaduma.
Ikusasa Jikelele Dzhordzh Marshall wazalwa emuva ngo-1880 edolobheni elincane eMelika Uniontown, elise ensimini ka -Commonwealth of Pennsylvania.
Umndeni wawuhlala ngezinga elikhulu, ukuchuma nodumo. Ubaba wathengisa amalahle kanye nokhuni, ongumama wezingane ezintathu.
Little Dzhordzh Ketlett Marshall kwaba nsé ontanga yabo. Wayengumuntu kancane ukhuluphele futhi lazy ukutadisha iphathwa okukha phezulu. Ngesikhathi esifanayo yena wema uhlamvu sina Cabangisisa, kwaba kancane zidla futhi ube nemfihlo.
Abazali uzilungiselele indodana yakhe esikhundleni sakhe, wayefuna ukumbona ekubaleni ophumelelayo. Nokho, le nsizwa wayengafuni ukuya abadayisi wakhetha omunye umsebenzi - lempi umsebenzi.
Yiqiniso, ubaba wayeneminyaka engu ngokumelene nalo. Kodwa kwakungenzeka kanjani ukuyeka lo mfana esivaliwe okunenjongo, ukuphupha ngasese ukuze sinqobe izwe?!
Lapho ngineminyaka engu-nesikhombisa, Dzhordzh Marshall wangena Military Institute of Virginia, okuyinto yabakhanga ngokukhuthazela kwakhe ezingavamile nokulinganisela.
Iminyaka emine ukuqeqeshwa yadlula ngokushesha futhi buthule, futhi manje uqala biography of George Marshall dapple ngokunqoba lokuqala lezempi.
I abasha uLieutenant yesibili Ufika wathumba ngamasosha zokusabalalisa njengesosha elihamba phansi futhi ukhonza lomayelana nePhilippines. Ngemva kwezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili ezinikezele wanquma ukukhulisa amakhono ezempi futhi wathola isikhundla sokuba ukaputeni.
Lapho ngineminyaka engu-amathathu nesikhombisa ka Dzhordzh Marshall iya phambili. IMpi Yezwe Yokuqala kwaba ngawo ugcwaliseka ngokugcwele, amabutho oMfelandawonye kukora ukunqoba abakhaliphile ongumakadebona ukunqotshwa esabekayo. Europe lusobishini igazi, ukwesaba kanye nokubulala.
Cool futhi unflappable, Marshall ababebakhonza abasebenzi-phoyisa, signalman nokwanelisayo ngokucophelela imisebenzi yabo eqondile bamangale ngobuqotho ukuthi kahle okulungiselelwe bakubo, nokuthi izenzo eziyinqaba uncoordinated zamabutho azihlanganisa.
Wayazi ukuthi asikwazi, wayazi ukuthi ngabe yena sayenza ngendlela ehlukile. Kodwa akakwazanga ukuthatha ukushintsha into.
Phuma iqembu induna wokuvelela akazange, kodwa wayezele ithuba - ogulayo isikhulu esiphezulu owayehola eyohlinzwa ezibalulekile ezempi. Marshall ngesibindi futhi ngesibindi fuza phatha.
Ngokushesha athuthukile uhlelo impi, deftly ukusebenzisa izinsiza: kwamandla omuntu, amabalazwe kanye namanye amadokhumenti.
Ukusebenza, eholwa Mashallah yimpumelelo. Okuqukethwe-ukuphathwa labelwa ukuba nesibindi futhi ohlakaniphile induna elisezingeni sombutho.
Ngemva kwalokho, kwakunabanye elikhanyayo, impi lolungenamaphutsa kuhlelwe, okuyiwona George Catlett uyakumnika jikelele, kodwa impi iphelile, futhi lesi sithembiso Umbe kube ngubumnyama.
Ngemva kwempi, ngisho uphonse isikhundla (okuhambelana oda isikhathi ukuthula), kodwa akuzange kuyidambise intshiseko i abanolwazi inkonzo yezempi.
Kusukela ngo-1919 Dzhordzh Marshall wathola ukuqokwa zokuhlonipha esengaphansi Pershing, bese kuphele iminyaka emithathu singatheli wakhonza e-China, bese bazibandakanya emsebenzini owodwa owenziwe nokufundisa Infantry School, State of Georgia. Le sevisi ahlukahlukene alethwe lempi angamaqhawe kuphela umusa wathola abashisekeli abanethonya, wafunda ulimi lwesiShayina, ezivezile phakathi ozakwabo ngubani babemhlonipha njengoba uyindoda ethembekile futhi professional.
Kuyaphawuleka ukuthi Marshall wayengomunye kwabambalwa waxwayisa United States lobuholi ibutho American ayilungele impi. Wakhuthaza ekuqiniseni amasosha kanye imishini nge imishini emisha.
Kuyathakazelisa ukuthi imisebenzi yezempi ungagxambukeli George Catlett ahileleke ezindabeni zomphakathi. Ngokwesibonelo, maphakathi nawo-1930, wakha uhlelo emikhulu yokuthola umsebenzi kwentsha (njengengxenye inqubomgomo Roosevelt sika).
Izenzakalo 1939-1945 babe isehlakalo esibaluleke kakhulu endimeni biography of George Marshall.
Ngonyaka kugqashuke izimpi, wathuthela e-Washington, lapho wamiswa isikhundla Umsizi uMphathi Ukuhlela Military (General Abasebenzi). Ngokushesha ngemva kwempi kwathiwa umholi Sane waklonyeliswa elisezingeni Jikelele kanye aphathiswa Jikelele Abasebenzi Army.
Nakuba kokuthunyelwe kwakhe wemfanelo, esanda Jikelele wakhuthaza abakhethayo inkonzo yezempi kanye kusungulwa i-National Guard, wayekwazi ukuzikhuthaza kabusha Ministry of War kanye njalo wahlanganyela ekuqiniseni amasosha. Ulwazi olwanele, waxwayisa ngokuphindaphindiwe uhulumeni ngezingozi kuhlasela Japanese.
Ukuhlela imisebenzi eziningi zamasosha yaphela ngempumelelo-United States, Marshall waphinda wadonsela ukunaka kaMongameli. Uba umeluleki Roosevelt ku ngokuziphatha ubutha, ephelezelwa kweNhloko Yombuso ngesikhathi congresses ehlukahlukene izingqungquthela, kanye ukugada ekudalweni kwendoda nowesifazane ngebhomu le-athomu.
Yini eziphakeme safinyelela Dzhordzh Ketlett emsebenzini? phambili yesibili wavulwa, Izimpahla izikhali nokudla kokuphindela eSoviet Union, impi iphela ne-Italy lawela amabutho laseNormandy ngokuba umsebenzi iJalimane lamaNazi.
Ngokuvamile, induna kwabasebenzi waphoqelela wahlala ithunzi futhi akazange agomele ubuqambi umsebenzi kwezinye imisebenzi yezempi.
Endaweni emnyama ku biography lempi
Jikelele Lee ukusetshenziswa kwezikhali-athomu ngokumelene Hiroshima futhi Nagasaki unesibopho? Ngokusho ubufakazi kweminye imithombo, Marshall mathupha belulekwa umongameli ukusebenzisa izinyathelo ezinqala. Nokho, kukhona olunye ulwazi, owawuthi Dzhordzh Ketlett wacabanga ukuthi ngemva kokuqhuma kwamabhomu e-athomu sasingekho isidingo, futhi ngizisole ukuthi ngesikhathi ukusebenza, kwashona amasosha ezitha nezakhamuzi eziningi.
Kamuva, aphawule ngalesi sigameko, i jikelele American wathi zenuzi ngokweqa kudingeka bonyana asetjenziswe ukuze ukuqeda impi, kodwa ngesikhathi esifanayo, bavumile ukuthi intengo ukunqoba yayiphezulu kakhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, ngemva yokubuyiswa eMarshall Japanese waqeda umsebenzi wezempi futhi wajoyina service zamanxusa.
Umsebenzi wokuqala kwaba ukusungula isimo jikelele elinesibindi eChina, ukuvikela izwe kusukela kuqala impi yombango. Nokho, umsebenzi omuhle kuhlulekile, futhi Dzhordzh Ketlett wabuyela ekhaya.
Khona-ke uMongameli uTruman ukumqhubela unobhala isimo, okuyinto kuhilelani wemfanelo ongathí sina. Inselele entsha Marshall ukuguga kwase kuthuthuke inqubomgomo angaphandle, okungukuthi, ukubuyiselwa kwamaZwe.
Engumthengisi baseMelika asabela ngayo imisebenzi yabo, + njengoba bekulokhu kunjalo, kahle futhi ngenkuthalo.
Ngaleyo minyaka, I-Europe lalibhidlike. Phansi izakhiwo zezimboni, libulawa indlala abantu, yaphahlazeka umnotho kanye nokukhuphuka kwamanani ezimpahla esabekayo. Konke lokhu ngaphansi kwesimo izinkumbulo ezimbi olunegazi ecindezelekile nesililo nezakhamuzi.
Futhi ngakho kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo Dzhordzh Ketlett linikeza uhlelo kulungise ngamazwe.
Yayiyini uhlelo George C. Marshall? Kwaphela iminyaka emine, Melika imahhala ukuze uthumele amandla lithi elishumi elinamithandathu okuyinto Isivumelwano esasayinwa, amadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-nambili, okuyinto edingekayo kuphela ukusebenzisa ukubuyisela ibhizinisi (noma ukwakheka ezintsha), kanye nokwakha amathuba emisebenzi.
Amazwe eziye abathola usizo ngaphansi kohlelo Marshall: England, France, eNtshonalanga Jalimane, eHolland, Austria, iBelgium nabanye. Kamuva ohlwini kuhlanganisiwe Japan nakwamanye amazwe ase-East Asian.
EU.SSR Finland wenqaba usizo.
Omunye nemibandela "LukaMarshall" kwaba befuna ukususwa ohulumeni amaqembu lamaKhomanisi.
States ekubasizeni ngokuhambisana lolu hlelo, ngemva kweminyaka engamashumi amabili, ukwazile ukuthatha indawo yayo efanele phakathi lamazwe ahamba phambili emhlabeni.
Akumangalisi ukuthi i-ukudalwa Uhlelo yayo Marshall bathola uMklomelo KaNobel. Ngaphezu uMklomelo KaNobel, Dzhordzh Marshall waphawula nezinye iziqu zokuhlonipha, ukhishwa imiklomelo eminingi futhi izindondo. Igama lakhe kunikezwa izikole kanye izindlela.
Umfanekiso Marshall ekhazimulayo kubonakala kule drama lempi Stivena Spilberga "Ukulondoloza Private Ryan", lapho American General othulwe izilaleli ngendlela nozakwabo bazi: zinesibindi, ethembekile, bahlakaniphe nezinhle.
Dzhordzh Ketlett Marshall wafa eneminyaka kweminyaka engamashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili.
Krivoy rog - edolobheni omude kunayo yonke eYurophu. Top 15 ezikhangayo Kryvorizhzhya
John Lasseter: Biography, Filmography nesithombe
Otshalayo ekwindla zezimbali: igama. Autumn imbali ingadi: izitshalo, izinhlobonhlobo nokunakekela
Anatoliy Vladimirovich Tarasov: Biography, amarekhodi kanye amaqhinga we Umqeqeshi hockey edume